Umuntu ukubikezela ukuziphatha ngesilinganiso cryptocurrency ngokuya ngenani ama-oda afakwe kanjani? - Blockchain Izindaba
Wake wayisebenzisa yini ikhampasi inqubo ukuthenga noma ukuthengisa a cryptocurrency ku-exchange inthanethi?
Ake sithi ufuna ukuthenga eyodwa Bitcoin ngoba $9,500. Khona-ke udinga sokumemezela lezi isifiso emakethe kanye nabathengisi engaba ngokukhipha umyalelo. Abadayisi avele ngendlela efanayo ngokumemezela isifiso sabo ukuthengisa Bitcoin ngentengo ethile. Lapho izifiso nabathengisi uqondane amakhono abathengi, kokwenziwe waphetha ngokuzenzakalelayo. Amalungu afanayo oda awukaqedi kulotshwe lokho njengoba incwadi ukuze eyaziwa.
Njengomthetho, phezu Ukuhwebelana, incwadi ukuze uvezwa uhlobo itafula, lapho izicelo nabathengisi akhonjiswa abomvu, kanye abathengi’ izicelo kukhona oluhlaza. Imidwebo kwetafula ukukhombisa eziningi zemali kanye ukubaluleka zona uhlose ukuthengisa noma ukuthenga. Kumiswa ukusabalala is eslphambanweni lezi amatafula, noma umehluko intengo ukuze kwaneliswe isidingo iyona. I ephansi ukusabalala, ketshezi ngaphezulu lwefa mfihlo.
Eshadini ngenhla, tekuhlangana umkhawulo sithengiselane oda imelelwa izindonga ukuthi ngezikhathi uhlangane. Iphuzu uxhumano izindonga oluhlaza futhi abomvu iphuzu izinga samanje cryptocurrency.
Incwadi oda iqukethe oda umkhawulo kuphela, njengoba oda emakethe (wenza intengo emakethe) ziyafezeka kweso, futhi akwenzi mqondo ukubonisa ngabafuna encwadini ukuze.
Uhlaziyo incwadi oda kuyinto inkomba phambili nezimo zezimakethe, njengoba wonke inika umuntu ithuba sezulu izinguquko ngaphambi kokuba zenzeke. Uma, Ngokwesibonelo, sibona olwenzeka enkulu amabhidi ukuqaliswa ngentengo mkhawulo, singakwazi ukubikezela ukuthi ngokushesha nje emakethe ifinyelela lomkhawulo, kuyoba ukuntengantenga cuphuluza inqwaba yokuthengisa.
Ama-oda Equal abadlali ezinkulu zibaluleke ngokulinganayo ngokwenza zokuhweba izinqumo, njengoba zihlale olubonakalayo incwadi ukuze futhi kungaba ngokuphawulekayo nokususa ukuqondanisa amabutho. Ama-oda ngokuvamile zivela encwadini ukuze basondelene kakhulu izimo emakethe sika. Lapho emakethe ihamba kwelinye direction noma kwenye, basuke wadonsa ukuba intengo emakethe, Oqondisa lezinhlangano. Ngezinye izikhathi lapho intengo osondela ezingeni ukumelana, Ama-oda yokwenziwa (zokunamathela elifanayo) eduze komunye nomunye value, benzelwe encwadini ukuze.
Izinga we cryptocurrency
isitokwe exchang German ...
Inani Stellar: Omkhulu ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 17.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 18.05.2018
May 21, 2018 ngesikhathi 6:41 PM
May 22, 2018 ngesikhathi 5:44 PM
May 23, 2018 ngesikhathi 10:45 PM
May 25, 2018 ngesikhathi 8:56 PM
May 29, 2018 ngesikhathi 2:31 AM
Juni 8, 2018 ngesikhathi 2:36 PM
Juni 10, 2018 ngesikhathi 9:09 AM
Juni 13, 2018 ngesikhathi 8:25 AM
Julayi 21, 2018 ngesikhathi 10:39 AM